चिनियाँ नयाँ वर्ष अर्थात् वसन्त चाडको बेला अहिले रेलयात्रीको भीडले विश्वको ध्यान तानेको छ। दशौँ लाख चिनियाँ रेल यात्रा गरी पर्व मनाउन घर फर्किँदै छन् भने छुट्टी मनाउन हिंड्नेको भीड उस्तै छ।
हार्बिनमा बन्यो हिममूर्ती
उत्तर चीनको हार्बिनमा हिम एक्स्पो सुरु हुँदैछ। अत्यान्त चिसो यो क्षेत्रमा एक्स्पोका लागि विविध हिम मूर्ति तथा कलाकृतिहरू निर्माण हुँदैछन्। एक्स्पोका लागि १०३ मिटर लामो, १४ मिटर चौडा र ३१ मिटर उचाईको विशाल हिममूर्ति तयार भैसकेको छ भने कलाकारहरू त्यसको आसपास अन्य कलाकृति कुँद्न तल्लिन छन्।
यस्ता छन् २१ दुर्लभ तस्वीर
मानव इतिहासमा केही त्यस्ता क्षणहरु हुन्छन्, जसको पुनरावृत्ति हुदैँन । त्यस्तै केही क्षणहरु यी २१ दुर्लभ तस्वीरमा हेर्नुहोस् ।
खोजी हुदैँछ अंग्रेजीमा सबैभन्दा अलोकप्रिय शब्द
११ भदौ - अक्सफोर्ड डिक्सनरिजले अंग्रेजी भाषामा सबैभन्दा अलोकप्रिय शब्दको खोजी सुरु गरेको छ। उसले विश्वव्यापी रुपमा यस्तो खोजी सुरु गरेको हो।
यौनमा बढी सक्रिय हुन्छन् परोपकारी व्यक्ति
९ भदौ - पैसा दान दिनु, बुढाबुढीलाई बाटो काट्न सहयोग गर्नु, अपरिचित मानिसलाई बाटो देखाउनुजस्ता कामले तपाईंलाई नैतिक सन्तुष्टि मात्रै दिदैँन।
ब्रिगेडियर बन्यो पेन्गुइन
७ भदौ - एउटा पेन्गुइनले सैन्य सेवामा प्रवेश गरेमा कुन पद प्राप्त गर्ला? तपाईंलाई विश्वास नलाग्ला तर स्कटल्याण्डको एडिनबरा चिडियाखानामा रहेको एउटा पेन्गुइन भने भर्खरै बिग्रेडियरमा पदोन्नति भएको छ। यद्यपि सो पेन्गुइन स्कटल्याण्डको नभई नर्वेको राजाको मानार्थ...
ती ८ संकेत, जसले तपाईंको सम्बन्ध धरापमा परेको जनाउँछ
६ भदौ - अचेल मानवीय सम्बन्धहरुको प्रकृति अस्थायी बन्दै गएको छ। तैपनि मानिसहरु आपसी सम्बन्धलाई टिकाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। कतै तपाईंको सम्बन्ध पनि खतरामा त छैन? पढ्नुस् ८ संकेतः
डरलाग्दो सेल्फी लिने यी युवती
६ भदौ - रुसकी एक युवती आफ्ना सेल्फीका कारण सामाजिक सञ्जालमा छाएकी छिन्। एञ्जेला निकोला नामकी ती युवती डरलाग्दो स्थानहरुमा उभिएर लिइएको सेल्फीका कारण इन्स्टाग्राममा चर्चित छिन्। उनले अग्ला छाना, गगनचुम्बी भवन, अफ्ठ्यारा पुल आदिमाथि उभिएर लिएका सेल्फी...
अचम्मका आधादर्जन काम
३ भदौ - मानिसहरु संसारमा पेट पाल्न र समय बिताउन अनेक पेशामा संलग्न छन्। तीमध्ये केही पेशा छन्, जो अस्तित्वमा रहेको कुरा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। कुखुराको लिङ्ग छुट्याउनेदेखि कुकुरको खाना चाख्नेजस्ता केही रोचक पेशा यसप्रकार छन्:
बुद्धिमानका १२ गुण
१ भदौ - बुद्धिमान हुनु भनेको के हो? एकै वाक्यमा यसको उत्तर दिन सम्भव नहोला। तथापि यसलाई मानिसका केही विशेषताहरुले व्याख्या गर्दछन्। बुद्धिमान व्यक्तिका केही लक्षणहरु (गुण तथा अवगुण) यसप्रकार छन् :
यी हुन् सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका १० देश
३१ साउन - सोझो तरिकाले हेर्दा जति धेरै काम ग¥यो, त्यति बढी उत्पादन हुनुपर्ने हो। तर अहिलेको विश्वमा यो कुरा साँचो होइन। सबैभन्दा धेरै कूल गार्हस्थ उत्पादन भएका १० मुलुकमध्ये सातमा सबैभन्दा छोटो ‘वर्किङ आवर’ रहेको पाइएको छ।
पुस्तक पढ्दा आयु बढ्ने
२८ साउन - आफ्नो आयु बढाउन कसलाई मन नहोला र? तपाई‍ पनि आफ्नो आयु बढाउन चाहनुहुन्छ भने पुस्तक पढ्नुस्। किनभने येल विश्वविद्यालयमा हालै गरिएको एक अनुसन्धानमा नियमित पुस्तक पढ्ने व्यक्ति नपढ्ने व्यक्तिभन्दा औसतमा दुई वर्ष बढी बाँच्ने देखिएको छ।
के ‘कपिङ थेरापी’ले साँच्चै काम गर्छ?
२६ साउन - यस पटकको ओलम्पिकमा २१ स्वर्णपदक विजेता माइकल फेल्प्ससहित कैयौँ खेलाडी शरीरमा डाम लिएर खेलिरहेका देखिए। ‘कपिङ थेरापी’ भनिने उक्त परम्परागत चीनियाँ पद्धतिले दुःखाई कम गर्ने विश्वास गरिन्छ। तर के साँच्चै कपिङ थेरापीले काम गर्छ त?
ओलम्पिकले एक पटक मात्रै मौका दियो क्रिकेटलाई
२५ साउन - सन् १९०० मा पेरिसमा आयोजित ओलम्पिकमा क्रिकेटको पहिलो खेल खेलाइएको थियो। र, त्यही खेल ओलम्पिकमा खेलाइएको अन्तिम क्रिकेट खेल पनि थियो।
२७ पत्नीसँग बस्नेका १ सय ४५ सन्तान
२३ साउन - क्यानाडामा एकजना पुरुष आफ्ना २७ पत्नीसँग बस्दै आएका छन् । यद्यपी देशमा एकभन्दा बढी पत्नी राख्न वा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन्। त्यसैले उनी आधिकारिकरुपमा ती आफूसँग बस्दै आइरहेका महिलाहरुलाई साथी बताउने गर्छन्।
पत्ता लाग्यो ‘फिमेल अर्गाज्म’को रहस्य
२२ साउन - वैज्ञानिकहरुले महिलाहरुमा अर्गाज्म अर्थात् यौनमा चरमसुखको रहस्य पत्ता लगाएको दावी गरेका छन्। उनीहरुले महिलाहरुको चरमसुखको अनुभूति अण्ड निष्कासनसँग सम्बन्धित रहेको जनाएका छन्।
अनलाइन प्रेमिका भेट्न चीन गएका एक व्यक्ति अस्पताल पुगे
१८ साउन - नेदरल्याण्डका एक व्यक्तिले इन्टरनेटमा भेट भएकी प्रेमिकालाई चीनको एक एयरपोर्टमा १० दिनसम्म पर्खेका छन् । तर अन्त्यमा प्रेमिका नआएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
१७ साउन - मानव इतिहासमा केही त्यस्ता क्षणहरु हुन्छन्, जसको पुनरावृत्ति हुदैँन । त्यस्तै केही क्षणहरु यी २१ दुर्लभ तस्वीरमा हेर्नुहोस् ।
२५ हजार फिटबाट बिनाप्यारासुट हामफाल्ने व्यक्ति
१७ साउन - ल्युक एइकिन्स नामक अमेरिकी नागरिक २५ हजार फिट माथिबाट बिना प्यारासुट हामफाल्ने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् ।
असमान श्रमविभाजनले बढाउँछ सम्बन्धविच्छेद
१४ साउन - एक नयाँ अनुसन्धानमा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धलाई असमान श्रमविभाजनले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
डाइनोसर कसरी कुरा गर्थे?
१३ साउन - डाइनोसर करोडौँ वर्षअघि नै पृथ्वीबाट लोप भइसक्यो। तर पनि त्यो भयानक र भीमकाय प्रजाति अझै मानव अनुसन्धानको विषय बन्ने गरेको छ। हालै वैज्ञानिकहरुले डाइनोसरहरुले आपसमा कसरी सञ्चार गर्थे भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका छन्।
एउटै काम, एउटै व्यवहार र एउटै ब्वाइफ्रेण्ड!
११ साउन - अष्ट्रेलियाको पर्थमा बस्ने अन्ना डेसिन्क र लुसी डेसिन्क संसारकै सबैभन्दा मिल्दा जुम्ल्याहा हुन् । तीस वर्षको उमेरमा दुवैको जीवन सामान्य मान्छेले सोच्नसक्नेभन्दा फरक तरिकाले बितिरहेको छ।
बिरालोबारे अनौठा तथ्यहरु
८ साउन - बिरालो मानिसको सबैभन्दा बढी मनपराइएको घरपालुवा जनावर हो । गाउँघरमा मुसा मार्नदेखि लिएर सहरमा मुटुराेगको खतरा कम गर्न समेत बिरालो पाल्ने गरिन्छ । बिरालोबारे केही रोचक तथ्यहरु पढौँ :
बाख्रा पनि हो मानिसको नजिकको साथी
५ साउन - ‘बायोलोजी लेटर’ नामक जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार १० हजार वर्षदेखि मान्छेको संगतमा रहदैँ आएको बाख्रा पहिले सोचिएभन्दा धेरै बाठो भएको र मानिससँग कुकुरपछि भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्न सक्षम रहेको देखिएको हो।
सन् २०१६ को आयु एक सेकेन्ड थपिने
३० असार - सन् २०१६ अन्य अधिक वर्षभन्दा एक सेकेन्डले लामो हुने भएको छ । सुन्दा यो कुरा हास्यास्पद लाग्न सक्छ तर यो साँचो हो । पृथ्वीले गर्ने परिक्रमाका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
जहाँ डल्फिनले मान्छेलाई माछा मार्न सघाउँछ
२९ असार - ब्राजिलको साओपाओलोभन्दा करिब दुई सय माइल दक्षिणमा पर्ने लगुना एउटा सानो तटीय सहर हो। त्यहाँका धेरैजसो मान्छेले माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दछन्। तर, अचम्मको कुरा के भने, यहाँका माझीहरुलाई माछा समात्न डल्फिनले सघाउने गर्दछ।
केटाकेटीमा औँला चुस्ने व्यक्तिलाई कम एलर्जी
२८ असार - साना केटाकेटीहरु प्रायः औँला चुस्ने वा नङ टोक्ने गरिरहन्छन्। जन्मिनुभन्दा पहिले गर्भमै पनि तिनीहरु औँला चुसिरहेको अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्टहरुमा देख्न सकिन्छ।
डुङ्गामा स्कुल !
२१ असार - बंगलादेशमा एउटा संस्थाले डुङ्गामा स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिधुलाई स्वनिर्भर नामको गैर नाफामुखी संस्थाले एक सयभन्दा बढी डुङ्गामा स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ, जसबाट करिब सत्तरी हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् ।
१६ असार - संसारमा मानिस मात्र होइन, जनावरहरू पनि वेश्यावृत्ति गर्छन् । यो कुरा जनावर विशेषज्ञहरूले १९९८ मा अन्टार्कटिकामा पत्ता लगाएका हुन् । उनीहरुले एडेली पेन्गुइन जातिमा वेश्यावृत्तिको प्रचलन फेला पारेका थिए ।